Seho Anime 16 an-tsehatra miaraka amin'ny kalitaon'ny valanorano - Hafa
24+ amin'ireo seho Anime malaza tsara indrindra izay hampilatsaka ny valanoranonao
Hentitra aho raha ny resaka dubs, noho izany dia voatery ho ela na ho haingana ity lahatsoratra ity.
Fantatrao ve ny zavatra tsikaritro momba ny seho anime nantsoina hoe? Misy an tsy misy farany habetsahan'ny mpankafy nantsoin'ny HATE ho anime's.
Farafaharatsiny izany no tsikaritro tamin'ny naha-anisan'ny vondrom-piarahamonina anime an-tserasera.
Maninona ny mpankafy no mankahala ny dubs anime? Tsy haiko, ary tsy eto hiady hevitra momba izany aho.
Fa ny zaraiko eto dia 21+ amin'ireo seho anime malaza tsara indrindra hitako hatramin'izay.
Ka ndao hitsambikina avy eo, lohany aloha!
Matoky aho fa hahita tombam-bidy ianao amin'ireto seho ampiasain'ny anglisy ireto.
1. Toy izany koa ny mpanampy
Maid Sama? Miaraka amin'ny anarana toy izany dia tsy maintsy ho anime harem misy tovovavy mahafatifaty, sa tsy izany?
Maid Sama dia andiana tantaram-pitiavana / hatsikana nifantoka tamin'ny mpilalao lehibe roa: Usui Takumi sy Misaki Ayuzawa.
Ary tsy maintsy lazaiko hoe: Iray amin'ireo seho an-tsehatra malaza antsoina hoe anime izay hitako hatramin'izay.
Io no antony nahitako seho anime be dia be tamin'ny diako. Indrindra amin'ny karazana hatsikana sy tantaram-pitiavana.
Ary tsy toy ny seho mitovy amin'ny sokajy misy azy, tsy manam-paharoa izy afaka manandrana azy.
Ny fizarana tsirairay dia mandrisika anao hanaikitra indray.
Anime izay afaka mampihomehy ahy, mitantara tantara ary mitaona ahy ho liana mendrika ny deraiko. 100%.
Mifandraika: Fanononana 15 mpanampy vehivavy momba ny fiainana sy ny fitiavana
Nodame (eo ankavia) ary Chiaki (eo ankavanana) no mpandray anjara lehibe amin'ilay fampisehoana.
Nodame Cantabile dia anime miresaka mozika amin'ny iraka hitady ny filan'izy ireo.
Raha mbola tany amin'ny oniversite.
Gaga aho fa mbola tsy nahita an'ity anime natolotry ny olona ity (olona iray angamba).
Tonga hatrany ny dubbing. Milalao tsara amin'ny tarehin-tsoratra ny feo. Ary mazava ho azy fa ny anime dia kintana manana ny azy manokana.
Fangaro mifangaro hatsikana / sombin'aina sy tantaram-pitiavana mifangaro rehetra. Raha tsy misy ny cliche hita amin'ny seho mitovy amin'izany.
3. Fa ianareo ry zalahy Fault Tsy malaza aho
Watashi (amin'ny fiteny japoney) dia sary sokitra fiainana mifantoka amin'ny mpilalao fototra iray.
Ary izany toetra izany dia Tomoko Kuroki (miaraka amin'ny volo mainty etsy ambony).
Raha mieritreritra ianao fa nahita ny sombin'ny fiainana rehetra dia misy ny mahita… Miandrasa fotsiny mandra-pijerinao ity.
Watashi no tena mahasosotra, mahaketraka, andian-tantara an-tsokosoko manintona Hitako.
Tomoko Kuroki manandrana mitady namana ary mifanerasera amin'ny hafa. Saingy tsy nahomby tokoa ka mamono ny mijery aza.
Heveriko fa io lafiny amin'ny anime io no mampamirapiratra azy. Satria tsy betsaka slice of life dia mampiseho izay maneho ny lafiny 'ratsy' amin'ny toetra amam-panahy sy ny lesoka.
Aza adino ity iray ity!
Mampahatsiahy ahy an'i Nodame Cantabile betsaka ity anime ity. Samy mitovy amin'ny lafiny maro izy ireo.
Ny dubbing dia tsara amin'ny seho roa.
Barakamon dia andiam-piainana mifantoka amin'ny calligrapher: Seishuu Handa. Zato 23 taona izay nirahina hiaina amina nosy iray hanova ny fihetsiny. Ary miasa amin'ny fampandrosoana azy manokana.
Barakamon dia hampihomehy anao saika isaky ny fizarana. Ary mbola tsara kokoa noho izany aza, ho tianao ny fivoaran'ny tena manokana.
Ny iray amin'ireo toetra tsara indrindra amin'ity anime ity dia ny fomba itodihany lavitra amin'ny serivisy fan-service sy 'harem'.
Mandeha mampiseho anao anime dia tsy mila hadalana rehetra hanaporofoana ny halehibeny.
5. Resadresaka ifanaovana amin'ny tovovavy Monster
Ireo mpilalao fototra amin'ny sary iray.
Resadresaka ifanaovana amin'ny tovovavy Monster , anime navoaka tamin'ny taona 2017. Ny tantara dia mifototra amin'ny andian-dahatsoratry ny tantarany.
Mbola andiany anime andiam-pahatsiarovana mahafinaritra hafa ny mijery azy, misoroka ny cliches mahazatra, ary manana dub be.
Ny endri-tsoratra vavy 4 lehibe dia Demi-Humans. Samy manana ny fahaizany manokana, ny drawbacks ary ny fanamby.
Rehefa mijery ny anime ianao dia mandalo fanamby amin'ny fihavanana amin'ny olon-tsotra ny mpianatra tsirairay.
Ary ny fiezahana hiditra anaty fiarahamonina izay tsy mahatakatra azy ireo hoe iza izy ireo.
tsy fampisehoana haingam-pandeha izany, ary tiako izany momba izany.
Mety fotsiny ny hafainganam-pandeha ary tiako io vaovao io raha ny fampisehoana sombin-fiainana no mandeha.
Mifandraika: Ireto mpandray anjara Anime 11 ireto dia anisan'ny naseho indrindra
Claymore dia hetsika / nofinofy mampiseho feno herisetra tafahoatra, fotoana maizina sy mampihetsi-po.
Ity dia iray amin'ireo sarimiaina vitsivitsy voalohany nojereko.
Mifantoka amin'ny Clare , mankany Claymore. Midika izany fa olombelona novaina izy ary ny tanjony dia ny handrava an'i Yoma.
Azonao atao ny mieritreritra an'i Yoma ho karazana demonia / biby manan-kery lehibe ananan'olombelona.
Amin'ireo seho mahagaga sy manaitra rehetra hitako tamin'ny seho maro dia misongadina i Claymore.
Ary ny fandefasana feo dia mifanaraka amin'ny andraikitry ny mpilalao tsirairay nefa tsy manandrana mafy loatra na mahafoy kalitao.
Raha gore sy herisetra no seho ataonao (toa ny AOT na Akame Ga Kill) dia andramo ilay kinova voantso.
Amagi Brilliant Park dia anime fohy ao amin'ny karazana hatsikana / majika.
Ny tantara dia mifantoka amin'ny voly fialamboly mahagaga eo an-tsisin'ny bankirompitra, raha tsy afaka mitondra mpanjifa ampy izy ireo.
Noheveriko ho tsara ny dub. Ary ny sasany amin'ireo anjara asan'ny olona sasany dia nihomehy ahy foana.
Ary maranitra tsara ilay dinika.
Tiako ny lafiny 'asa' amin'ity fampisehoana ity. Miaraka amin'ny zava-misy dia misy hatsikana sy majika mifangaro ao.
Tsy ny seho malaza indrindra fa tsy tokony
Azoko atao ny manolotra azy raha tianao ny sarimiaina hatsikana. Ary aleoko ny andiany iray fohy (fizarana 13).
8. Lagoon mainty
Black Lagoon no seho an-tsokosoko feno horonantsary feno gangster izay ho hitanao.
Tsy isalasalana fa hahita sarimiaina afaka mifaninana ao anatin'ny sokajy iray ihany ianao, mainka moa fa handresy ny kalitaon'ity andiany ity.
Lagoon mainty misy endri-tsoratra 4 lehibe: Revy, Rock, Benny SY Holandey
Anarana tsotra, sa tsy izany? Izay no mahatonga ny anaran'izy ireo ho mora tadidy.
Rehefa milentika ao anaty andiany ianao dia ho hitanao fa mainty sy miolakolaka ary lalina ary mangirana izy io.
Ary ny zavatra dia: ny fomba filalaovan'ity anime ity dia tena zava-misy ka azo ampitahaina amin'ny tena fiainana.
Ny anime dia tsy mihoatra ny asa tsara fotsiny mampiseho ny olana lalina amin'ny endrika mavitrika. Ary izany no antony iray amin'ireo andiany tsara indrindra ho ahy.
Ary rehefa dinihinao ny fomba mahavariana ny dikanteny anglisy,… dia mahatonga ny Black Lagoon ho matanjaka sy mendrika kokoa eo amin'ireo an-tsehatra antsoina hoe anime any.
Mifandraika: Lisitr'ireo anime psikolojika 30 mila dinihinao
Hyperdimension Neptunia dia andian-tantara anime parody / hatsikana mifototra amin'ny tontolon'ny lalao sy ny CPU'S.
Ny andian-tsarimihetsika dia nalaina tamin'ny lalao video tao amin'ny Play-station 3 sy PSP.
Raha ampitahaina amin'ny seho hafa amin'ity lisitra ity, Hyperdimension tsy ny lehibe indrindra. Indrindra fa tsy lavitra ny fanaovana tantara, cliche's, kalitao sy izay rehetra jazz.
Fa ny fitarainana, ny famoahana feo ary ny fifanakalozan-kevitra dia PERFECT.
Tsy azoko ny tsy mampihomehy ity seho anime ity indraindray. Na ahoana no nahaizan'ny mpamorona namoaka dinika fialamboly toy izany nandritra ny andiany.
Isak'izay dia hojereko ny seho Anime izay tsapako fa manana ny fahaiza-manao be dia be… Saingy tsy mifanaraka amin'izany.
Ary nefa miaraka amin'izay dia mahavita manasongadina ireo mpilalao tiako be loatra ka tsy tena izy.
Hyperdimension Neptunia dia iray amin'ireo anime 'hafahafa' ho ahy.
Ary tsy handiso fanantenana anao ny dubbing raha manandrana ianao.
Mifandraika: Tovovavy Anime 17 mahafatifaty izay hamono anao amin'ny lokony
10. Panic Metal feno
Azonao atao ny milaza izany amin'ny alàlan'ny fijerena ny sary avy amin'ny planeta hafa fotsiny ity anime ity.
Ary rehefa manomboka miditra ao ianao dia mahatsapa fa avy amin'ny planeta iray hafa miaraka.
Panic Metal feno dia iray amin'ireo sarimihetsika mecha FEW efa hitako. Ary tsy manenina aho nijery an'ity seho mecha ity manokana.
Ny fizarana 1 dia manomboka amin'ny hafainganam-pandeha. Mifantoha amin'ireo mpilalao fototra: Sousuke Sagara. Izay manana fiaviana milisy ary miasa ho an'ny vondrona miaramila tsy miankina.
Ny mpilalao fototra hafa: Kaname Chidori. Filohan'ny filankevitry ny mpianatra iray tompon'andraikitra, malaza, manetry tena, nefa atahorana ho alaina an-keriny.
Ankoatry ny dubbing, feo ary fifampiresahana, Panic Metal feno seho hafahafa.
Midika izany fa ny andiany voalohany dia nahaliana ahy, saingy tsy namela ahy 'lesoka' tamin'ny hatsarany.
Ny vanim-potoana faharoa dia nandroaka ahy, ary tsy nino aho fa ny andiany faha-2 dia tsara lavitra noho ny voalohany.
Ary nanaitra ahy indray ny vanim-potoana 'tantara-tantara' faha-3 tamin'ny hatsarany.
Tsy afaka manome anarana sarimihetsika anime miaraka amina vanim-potoana 2 mihoatra ny vanim-potoana 1 akory aho.
Tsy re io amin'ny ankamaroan'ny endrika sarimihetsika sy fialamboly amin'ity taranja ity.
Tsy afaka manome soso-kevitra feno amin'ny Metal Panic feno aho. Seho an-tampony toy izany be dia be ny tsy ampoizina.
Mifandraika: Fampisehoana Anime Anime izay hahatonga anao hidona amin'ny karazana
Shiki dia andian-tantara mahatsiravina / mistery azo ampitahaina amin'i Higurashi: Rehefa Mitomany izy ireo.
Raha oharina amin'i Higurashi, Shiki dia manomboka amin'ny dingana miadana. Raha ny marina rehefa niditra amina fizarana roa aho dia nanomboka nisalasala raha mendrika hijerena izany.
Saingy avy eo dia nanomboka nidina ny hafainganana ary nanomboka nanala ny saiko tao amin'ny karandohako ny fizarana tsirairay. Sombiny.
Hita eo ny fizarana feo, ny fandefasana feo ary ny fifanakalozan-kevitra. Ny fitantarana tantara dia iray amin'ireo tsara indrindra hitako (na dia miadana aza).
Ary ny zava-misy dia tsy azo inoana. Shiki dia iray amin'ireo namboarina mampalahelo indrindra, lozabe indrindra ary mampieritreritra.
Ary hanontany tena ianao hoe maninona ianao no tsy nijery azy io taloha kokoa rehefa vita izany.
Ny andian-tsarimihetsika mahery setra / mahery vaika dia mahazatra sy mahazatra ao amin'ny vondrom-piarahamonina anime.
Izy ireo dia iray amin'ireo karazana fampisehoana anime malaza (raha tsy ny ankamaroany) malaza eto ambonin'ny planeta. Toy ny DBZ, Fairy Tail, sns.
Voalaza fa - My Hero Academia dia anime izay nahagaga ahy.
Izaho dia ilay karazan-dehilahy izay rehefa avy naheno momba ny Anime be loatra aho dia mihira ary lasa tsy liana. Satria tsy misy ratsy noho ny Anime izay tsy afaka miaina ny fiheverana diso.
Saingy ny My Hero Academia dia ligy manokana. Manaporofo fa tsy mila 'originality' ianao hanaovana zavatra sangan'asa.
Ny dubbing dia ara-dalàna, marina ny fandefasana feo, ary maranitra ny famonoana. Plus ny tantara dia manintona ny sainao hatramin'ny fizarana voalohany.
Amin'ireo seho an-tsehatra rehetra naseho tao, My Hero Academia dia mendrika ny ho ao amin'ity lisitra ity.
Mifandraika: Lesona 5 avy amin'ny fianarako mahery fo
Owari No Seraph anime iray hafa nameno ahy fisalasalana. Fa nanohy aho ary nanandrana ihany.
Andian-tantara / hetsika nofinofy mitovy amin'ny Black Bullet sy Akame Ga Kill.
Ny fizarana voalohany dia manomboka toy ny Attack On Titan. Midika izany fa feno fihetseham-po, alahelo ary fanaintainana.
Rehefa avy nijery ny fizaran-taona 1 sy 2 dia afaka milaza aho fa fampisehoana mendrika io. Ireo mpilalao sarimihetsika dia nanao asa tsara nifanaraka tamin'ny feon'ireo mpilalao.
Ka fandresena izany raha ny fandehan'ny dubbing anglisy.
Ny anime ihany no tsy hetsika be indrindra hitako. Tsy misy toa an'i Akame Ga Kill na Fate Zero.
Saingy ny tantara, ny tarehin-tsoratra, ny anjara asany sy ny toetrany mihoatra noho ny natao ho ahy.
Ny mampiavaka an'io seho io dia ireo mpilalao. Ary ny fatorana toy ny fianakaviana izay iarahan'izy ireo manorina.
Raha misy ny vanim-potoana 3 dia hitsambikina aho hahita izany.
14. Mpanampy dragona an'i Miss Kobayashi
Andian-tsarimihetsika Anime 2017 iray hafa izay misy lafiny 'somary' mitovy amin'ny Resadresaka ifanaovana amin'ny tovovavy Monster.
Mpanampy dragona an'i Miss Kobayashi dia ampahan'ny fiainana / hatsikana miaraka amin'ny dragona hafahafa, mahery, mahery vaika.
Ny 'dubbing' mifanaraka amin'ity anime ity dia mitovy aminy Resadresaka ifanaovana amin'ny tovovavy Monster. Tsara ny mpandefa feo, ary mahatsikaiky ny fifanakalozan-kevitra.
Ny Dragon Maid an'i Miss Kobayashi ho ahy dia iray amin'ireo mampiala sasatra indrindra, nefa mahatsikaiky toy ny F anime izay nojereko.
Io ilay karazana seho azonao jerena nefa tsy matotra loatra amin'izany.
Ary amiko izany dia iray amin'ireo toetra tsara indrindra amin'ny anime. Heveriko fa nanao asa tsara izy ireo hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany.
15. Vonoy ny La Kill
Kill La Kill dia andian-tsarimihetsika anime izany tamin'ny voalohany, toa mampihomehy ary tampon'ny tampony.
Avy any ivelany ao dia anime izay manandrana fatratra ary somary tsy mahazatra. Tahaka ny fijerin'ny akanjo an'i Ryuko ny erotika sy ny fiparitahana be loatra rehefa mahery izy.
Ary ny 'sehatry ny fanovana' dia mitovy be amin'ny Volana Sailor.
Raha ny voalaza dia andiany anime hafa ity izay nanaporofo fa diso aho.
Araka ny efa nolazaiko teo aloha dia tsy maninona ny originality. Raha mbola ara-potoana ny famonoana, ary efa vita tsara toy ny akoho nendasina dia izay ihany no zava-dehibe.
Ary sahirana ianao mahita anime toa ny Kill La Kill miaraka amina dub anglisy mahery. Mpandefa feo mahafinaritra. Ary fifampiresahana mahatsikaiky nefa mifandraika.
Nahita be an-tsehatra nantsoina hoe anime aho ary saika tsy misy amin'izy ireo dia manakaiky ny kalitaon'ny Kill La Kill.
16. Lahatra Zero
Tsy afaka mandeha aho raha tsy miresaka Lahatra Zero ato amin'ity lisitra ity. Anime amin'ny karazana nofinofy / hetsika.
Alohan'ny hijerena ny Fate Zero dia nanandrana ny Fate Stay Night aho. Mendrika ny anime.
Nanantena aho fa ho tsara toy izany koa i Fate Zero. Saingy tsy afaka natao izany satria ny Lahatra Zero mitsoka ny zavatra antenaiko avo-lanitra.
Nahafinaritra ahy kokoa ny nibitsika, ny fandefasana feo ary ny fifanakalozan-kevitra tao amin'ny Fate Zero.
Ny zava-dehibe mahatonga ny Fate Zero ho tsara lavitra noho ny Fate Stay Night, dia ny hetsika.
Toy ny mampitaha ny anime toa ny K-ON amin'ny zavatra toy ny Attack On Titan. Mahery setra loatra ny AOT ary mahafatifaty loatra i K-ON raha oharina amin'ny fampitahana azy.
Ka raha mitady dub Fantasy dub ianao dia andramo ny Fate Zero. Iray amin'ireo tiako indrindra ao anatin'ny karazana nofinofy / hetsika izany.
Azonao atao ny mieritreritra an'i Michiko To Hatchin toa ny Black Lagoon. Izy io dia mitovy amin'ny vehivavy mahery vaika, tantara mahatsikaiky ary mpilalao miaraka amina foto-kevitra henjana mifandraika amin'ny heloka bevava.
Amin'ity tranga ity dia misy fihodinana kely eo amin'ny fomba fiainan'ny mpilalao fototra sy ny fomba fampifangaroany.
Ny anime dia tsy ambanin-javatra fotsiny, fa ny mpilalao feo sy ny fifanakalozan-kevitra dia mazava be. Michiko To Hatchin dia mendrika doka bebe kokoa noho ny toa azy.
18. Lalao vaovao!
Lalao vaovao! dia sombin'aina tiako indrindra. Azonao atao ny mampitaha ny kalitao amin'ny zavatra toa an'i Shirobako, ary koa ny tantara sy ny fomba fiarahan'ny olona hanao “zava-kanto” ho zava-misy.
Aoba Suzukaze dia mpilalao kilalao amin'ny indostria no ho afaka hifandray. Satria manonofinofy izy ny hiasa amin'ny orinasa filalaovana, ary mahomby.
Ny endri-tsoratra hafa toa an'i Umiko Ahagon (programmer) dia azo avela ho an'ny olona manao zavatra 'izay' raha ny lalao no resahina.
Fa na izany na tsy izany - New Game dia anime tsy manam-paharoa miaraka amin'ny tsirony ary ampy tsara ny olona mankafy. Miaraka amin'ny mafy dubbing.
Sword Art Online, ny anime Isekai nankahalaina sy nalaza indrindra tamin'ny fotoana rehetra. SY ny Isekai izay nanome aina ny karazana fantatsika ny ankehitriny.
Sword Art Online hatramin'ny vanim-potoana voalohany dia nanana ny sasany tamin'ireo mpilalao sarimihetsika anime lehibe indrindra. Ary marina izany na dia misy aza ny andiany alicization farany.
Iray amin'ireo antony mahomby amin'ny fahombiazana i SAO na amin'ny zana-tariby ambany na amin'ny dikanteny nantsoina hoe, satria tena tsara ny kalitao.
Ary mazava ho azy - miaraka amin'ny vanim-potoana marobe, SAO dia manana atiny marobe ho an'ireo mpankafy (na mpankafy vaovao) hidirany sy hanandrana.
Mifandraika: Izany no mahatonga ny zava-kanto amin'ny sabatra miady amin'ny Internet
Ireo Quintuplets Quintessential dia anime izay nahagaga ahy. Harem anime dia mazàna ho salantsalany, shty ary feno cliches ampy hameno tanko trondro.
Na izany na tsy izany, ity anime ity dia manana antso sasany ahafahanao 'mandalo' ilay zavatra hampiala anao.
Ny toetra amam-panahy (rahavavy) dia misy ifandraisany ary manana ny mampiavaka azy ampy hisongadinana nefa tsy hadino. Ary mazava ho azy - ny dubbing manampy ihany satria mifanaraka tsara.
21. Kenichi Ilay Mpianatra mahery indrindra
Kenichi dia toa sarimiaina hadino Androany izay tsy misy olona miresaka momba.
Izy io dia kilasika tanteraka amin'ny karazana shounen ary iray amin'ireo shounen kalitao kokoa natao hatrizay.
Miaraka amina lohahevitra iray mifantoka amin'ny asan-dahalo, ny fomba handresena azy, ny fampandrosoana manokana ary ny haiady, dia efa anime izay tsy mitovy.
ny kalitao ny dubbing eto, miaraka amin'ny sasany amin'ireo VA'S lehibe indrindra ao amin'ny indostria dia zavatra tokony hihiaka.
Madoka Magica dia mbola iray amin'ireo andian-tantara tiako indrindra mandraka androany. Raha fintinina, fizarana 12 ny anime dia manimba ny cliches zazavavy majika, ary mamerina azy io miaraka amina fehezan-dalàna sy tsiro manokana.
Samy manana ny tanjony ny toetra tsirairay. Na ny endri-tsoratra aza. Ary tsapanao ho 'fantatrao' ny toetranao tsirairay amin'ny fotoana nahavitanao ny sarimihetsika.
Studio SHAFT no ao ambadik'ity andiana tovovavy majika tsy mahazatra ity, ary toa ny VA'S voafidy ho azy no mety indrindra isaky ny litera.
Samurai Champloo dia anime hafa be loatra izay tsy miresaka momba ireo andro ireo.
Manana fahatsapana mitovy amin'i Cowboy Bebop izy ary izany tsy kisendrasendra rehefa fantatrao hoe iza no ao ambadik'izany.
Fanampian'ny samurai roa ny ankizivavy iray mahita lehilahy manitra voninkazo maintsoza, ary ny anime dia manalavitra ny lasa sy tsiambaratelony ary manome anao tsiro ny hetsika samurai toa tsara.
Miaraka amina olona vitsivitsy dia mora ny mahita ny antony mafy orina ny VA’S ao Samurai Champloo. Nofidina tamim-pitandremana izy ireo ary mifanaraka amin'ny tsikera sy naoty an'ny anime.
24. Re: Zero - Fanombohana fiainana any amin'ny tontolo hafa
Re: Zero, namboarin'i studio whiteoks dia tsy iray amin'ireo ihany tsara indrindra seho, fa io dia iray amin'ireo anime Isekai miavaka.
Io no karazana andiana psikolojika miaraka amin'ireo mahery fo mahery (noho ny fiantraikany), sy ireo singa misy ny zava-misy izay mahatonga ny olona ho velona. Indrindra ny MC.
Vitsy ny anime afaka mampitaha ny toetran'ny relatable ao amin'ny Re: Zero. Ary ny dub dia manatsara azy rehetra raha tampina daholo.
Ny anglisy sasany dia nantsoina hoe «anime» izay mendrika hotononina:
Ny Ambition Oda Nobuna.
Haganai: Tsy manana namana maro aho.
D. Lehilahy volondavenona.
Spice sy Wolf.
Snow White miaraka amin'ny volo mena.
Fiaran-dalamby siantifika iray.
Tovovavy mitifitra basy.
Ny devoly dia mpizara fotoana.
Inona ny dub anime tianao indrindra?
Anime an-tsekoly 32+ Lehibe ETO tokony hijerena
Ilay adihevitra tsy miverimberina Vs mitondra ady hevitra, sy ny antony isian'izany